Muchikamu chino, takawedzera zvimwe zvakanaka yemahara Whiteboard maapplication e Windows 11 / 10. Unogona kushandisa maturusi sepeni, eraser, zvinyorwa, nezvimwe, pane iyo whiteboard. Mimwe yeaya maapplication ane zvimwe zvakakosha maficha zvakare. Semuenzaniso, iwe unogona kuisa uye kududzira PDF, wedzera akawanda manotsi kune whiteboard, shandisa iyo lasso chishandiso, isa maumbirwo, uye zvimwe. Maturusi aya anogona kubatsira vana, vadzidzisi, pamwe nevamwe vashandisi.
Mahara Whiteboard maapplication e Windows 11 / 10
Isu takafukidza mamwe emahara emahara Whiteboard maapplication e Windows 11/10 pane ino runyorwa. Izvi ndeizvi:
MetaMoji Cherekedza Lite
Dhijitari Whiteboard RT
Ngatitarisei izvi maapplication rimwe nerimwe.
Seizvo zita rayo rinoratidza, iyi bhodhi chena inovandudzwa neMicrosoft. Izvi Microsoft whiteboard app inouya nezvinhu zvakawanda zvakanaka zvaunogona kuwana kubva kubha rekushandisa riripo pazasi pechimiro chayo. Iyo yekushandisa inoita kuti iwe uchinjire kune inking modhi iyo inopa matanhatu akasiyana mapeni (Bhuruu, Dema, Girinhi, Muraraungu, Galaxy, uye Tsvuku). Kune imwe peni, iwe unogona zvakare kugadzirisa iyo saizi nhanho. A yero highlighter, lasso chishandiso, uye maturu maturusi aripowo pasi peiyo inking modhi.
Kunze kwaizvozvo, unogona kushandisa bharari imwechete ku:
Isa chifananidzo uchishandisa webcam kana Bing yekutsvaga mufananidzo
Gadzira chinyorwa grid
Isa faira rePDF
Wedzera gwaro reIzwi
Gadzira runyorwa, nezvimwe.
Iyo ficha ku shanda pamwe nevamwe iripo zvakare inoita kuti iwedzere kubatsira. Iwe unogona kugadzira webhu yekugovana link uchishandisa iyo Kukoka mumwe munhu sarudzo, shandisa chinongedzo ichi nevamwe, uye tanga kubatana.
Kuti ushandise Microsoft Whiteboard, unofanirwa kusaina chero maakaunzi ako eMicrosoft. Mushure meizvozvo, unogona kugadzira whiteboard nyowani uye woishandisa chishandiso chako kutanga basa rako uchishandisa zviripo sarudzo.
Microsoft Whiteboard inouyawo iine ese maviri mavara uye grid kumashure. Iwe unogona kuseta chero eanowanikwa kumashure. Kune izvi, tinya pane iyo mitsara mitatu yakatwasuka icon inowanikwa kumusoro kurudyi kuvhura Zvirongwa, uye wobva wasarudza iyo Format Background kuita.
Kana iwe uchida, iwe unogona zvakare kushandisa iyo ekisipoti sarudzo iripo pasi pezvirongwa kuchengetedza yako whiteboard se PNG uye SVG mafaira.
2] MetaMoji Cherekedza Lite
MetaMoji Cherekedza Lite ibhodhi chena yemahara, kunyora-kutora, uye purogiramu yekududzira yePDF ye Windows 11/10. Iyi Anwendung inopa akawanda anonakidza maturusi ayo anoita kuti ive anobatsira kune vese vadzidzisi uye vanoshanda vanoshanda.
Kuti ushandise iyi app, unofanirwa kugadzira MetaMoji ID. Iyo inouya nemamwe pre-akagadzirwa matemplate aunogona kurodha mushure mekugadzira iyo MetaMoji ID. Unogona kushandisa chero eayo matemplate kana kugadzira chinyorwa chisina chinhu chewhodhi yako yebhodhi.
Iyo zvakare ine sarudzo yeku wedzera akawanda manotsi mune akasiyana tabo gwaro rechena. Mune yega yega tab, unogona kuwedzera akawanda mapeji. Uyezve, peji rinogona zvakare kuchengetedzwa se template.
Heano mamwe emamwe maficha ayo aunogona kushandisa kune yako chena bhodhi gwaro:
Shandisa mamiriro akasiyana
Lasso sarudza chishandiso
Meseji yemavara, nezvimwe.
Iwe unogona zvakare kuswededza mukati kana kunze kwechiratidziri. Nezve izvo, pinda uye bata iyo Ctrl kiyi uye fambisa mupumburu vhiri rembeva yako.
Kana yako whiteboard yagadzirwa, unogona kuichengeta seye JPEG mufananidzo kana yayo yakatsigirwa fomati.
Mediabyte Whiteboard app inopawo zvimwe zvinobatsira maficha. Mune ino app, unogona kugadzira kana kujoina chikamu.
Kutanga kugadzira whiteboard yako, unogona kushandisa maturusi aripo kubva kubha rekushandisa riripo kuruboshwe rweapp interface. Izvo zvinokutendera iwe:
Chinja saizi yemavara
Chinja peni ruvara, nezvimwe.
Pane Plus icon pane yekushandisa zvakare iripo iyo inoita kuti iwe utendese kanivhisi uye zoom mukati kana kunze kwetangi. Paunodzvanya pane iyo icon, icharatidza mabhatani maviri aunogona kushandisa kuswededza mukati nekubuda. Kuti ufambise kanivhasi, tanga wasarudza iyo Plus icon, wobva washandisa-kurudyi kwembeva yako.
Iwe unogona zvakare kuchengetedza yako chena bhodhi gwaro uchishandisa iyo Save bhatani. Iyo app inoshanda nemazvo, asi yayo yemahara vhezheni ine painogumira. Iyo yemahara vhezheni inoita kuti iwe uwedzere chete muenzi mumwe chete muchikamu. Zvakare, iyo yakanyanya nguva muganho wechikamu maminetsi gumi nemashanu pazuva.
4] Dhijitari Whiteboard RT
DigitalWhiteboardRT iri nyore Whiteboard app pane ino chinyorwa. Chishandiso chayo chinosanganisira chinomaka uye chishandiso chekudzima. Kune mana mamaki mavara anowanikwawo kusarudza kubva. Iyo Saizi yekumaka Sarudzo inowanikwawo pane yekushandisa uchishandisa iyo iwe yaunogona kusiyanisa hukobvu hwechiratidzo chakasarudzwa.
Nekutadza, iwe uchaona chete isina chinhu skrini isina bharanzi. Kuti uratidze bharaki pamwe nezvimwe zvinodzora, tinya pane iyo mitsara mitatu yakatwasuka pamusoro kuruboshwe kuruboshwe rweapp uye sarudza iyo App Anoraira sarudzo. Zvingave zvakanaka kana iine sarudzo yekukiya bharari. Izvi zvinodaro nekuti pese paunodzikisira iyo app, inoviga bhatani otomatiki uye unofanirwa kudzvanya pane yeApp rairo sarudzo kuti udzore bha rekushandisa kumashure nguva dzese izvo zvingave zvinokanganisa.
Inonakidza Ziva Chinyorwa sarudzo iripowo inoshanda senge muverengi weOCR uyo anoona iwo akanyorwa mavara kubva kubhodhi re whiteboard. Asi inoda kuvandudzwa sezvo isinga zive mavara nenzira kwayo.
Unogona kusevha chero chena chena gwaro iwe rawakagadzira mukati GIF fomati uye zvakare kurodha GIF mufananidzo pane iyo interface interface.
Iyi yemahara Whiteboard app inochengetedza rako rese basa mune chaiyo-nguva. Izvi zvinoreva kubuda muapp chero nguva hazvibvise data rako. Paunouvhura zvakare, inozotakura rako rapfuura basa.
[Mufananidzo uri 5] Basic Whiteboard
Sezvinoreva zita rayo, iro rakakosha kwazvo whiteboard app ye Windows 11/10. Unogona kufananidza izvi Basic Whiteboard app ine mabhodhi emakirasi umo vadzidzisi vanogona kungonyora nekudzima. Chinhu chimwe chete icho iwe chaunogona kuita pano. Unogona kutanga kunyora uchangotanga chirongwa ichi.
Unogona kushandura ruvara rwechinyoreso chako nemavara mana aripo kumusoro kwekurudyi kwechimiro chayo.
Iko hakuna sarudzo yekushandura ukobvu hwepeni. A Clear bhatani rinowanikwa kumusoro kwekuruboshwe iro rinobvisa zvemukati kubva kune iyo interface interface.
VTDC Whiteboard ndeimwe yakapusa app pane ino chinyorwa. Unogona kuishandisa pazvinhu zvakakosha chete. Izvo zvinongorega iwe unyore uye bvisa pane iyo interface yeapp. Bharaki rinowanikwa pazasi pechimiro chayo.
Chishandiso chayo chinosanganisira peni uye chishandiso chekudzima. Iwe unogona kushandisa mana akasiyana mavara echinyoreso chishandiso. Nekudaro, ingo dhirowa pahwindo rayo, uyezve unogona kusevha gwaro rako re whiteboard se JPG image.
Kuti uchengetedze whiteboard yako, tinya pane iyo New bhatani, wobva wadzvanya Ehe muhwindo rinobuda richikubvunza kana iwe uchida kusevha iyo faira kana kwete.
Ndeipi yakanaka yemahara Whiteboard app?
Kana iwe uchitsvaga imwe whiteboard app ye Windows OS, ipapo unogona kuyedza chero yataurwa pamusoro apa chena bhodhi maapplication uye wotarisa kuti ndeipi yakanakira iwe. Panyaya yezvimiro, Microsoft Whiteboard iri nani pane mamwe maapplication akafukidzwa mune urwu runyorwa.
Ndeipi yemahara Whiteboard ndiyo yakanakisa yekudzidzisa pamhepo?
Unogona kushandisa chero eiri pamusoro whiteboard maapplication ekudzidzisa pamhepo. Sei? Kutanga, shandisa some yemahara vhidhiyo musangano software kana app. Zoom uye Google Sangana ndedzimwe dzeakanakisa musangano wevhidhiyo maapplication aunogona kushandisa. Ose ari maviri anotsigira iyo skrini yekugovana chimiro. Mushure mekubatanidza vatori vechikamu, izvo mune yako vadzidzi, gonesa iyo skrini yekugovana ficha. Mushure meizvi, vese vadzidzi vako vachakwanisa kuona komputa yako. Iye zvino, tangisa chero eema whiteboard maapplication atakafukidza mune ino runyorwa uye tanga musangano.
Mashandisiro Ekushandisa Whiteboard muMicrosoft Matimu Musangano